Covid-19: Jizọs, ọ kwụsịla ịbụ nnukwu dibịa a, ya bụ dibia nke ndị dibia? Ndi m huru n’anya, ndi Black / African “Nwa aturu”, mana olee ebe Jisos Kraist gi, onye dibia? N'ezie, ihe karịrị ndị ụkọchukwu 1034, ndị bishọp na ndị nọn nwụrụ site na nje Corona | KONGOLISOLO
Nkekọ-19: Jizọs ọ̀ kwụsịrị ịbụ nnukwu dọkịta ahụ, dọkịta nke ndị dọkịta? Ndi m huru n’anya, ndi Black / African “Nwa aturu”, mana olee ebe Jisos Kraist gi di, dibia ndi dibia gara? N'ezie, ihe karịrị ndị ụkọchukwu 1034, ndị bishọp na ndị nọn nwụrụ site na nje Corona
Site na: KongoLisolona: April 8, 2020 00: 00 1 Comment
Onye nnọchi anya Ọkpara nke Chineke nke Israel nọ n'ụwa, Pope Francis (Bergoglio), kpebiri imechi ihe niile na Vatican wee gbaga Argentina, bụ obodo nna ya; ịlaghachi na nloghachi nke anụ ụlọ, na-agbahapụ Nnukwu Nsọ ya.
Onye nọchitere anya gị n’echeghị echiche Chukwu nọ ugbu a n’ebe nchekwa dị ka ndi ozuzu aturu, ndi ozi na ndi amụma. Ha niile na-eche sayensị ka ha chọta ihe ha ga-eme na ọgwụgwọ maka nje Corona ka ha wee laghachite kwa otu mkpu banyere Jizọs ahụ a ma ama.
Ka ọ dị ugbu a, Vatican yiri mkpọmkpọ ebe nke mgbe ochie. Churcheska niile na-ehi ụra (akpọghị ụzọ elekere mkpu) E mechiwo ụwa n'ihi na ha abaghị uru. Ma ndi dibia, ndi nyocha na ndi sayensi tinyere ndu ha itinye ndu n ’izoputa uwa. Ha na-arụ ọrụ ike, abalị na-adịghị ehi ụra, iji chọta panacea megide Covidien-19. Ọ dị nkenke, ajụjụ m dị mfe:
Ebee ka Jizọs Kraịst gị, onye dibịa bekee gara? Olee ebe nne m nwanyị jere, nne nke Chukwu, nwanyị a gọziri agọzi na nsọ nwanyị ruo mgbe ebighi ebi? (...). Ebee ka ndị nsọ niile ma gọzie nke Chineke gara? Sanye senti ka ndị Katọlik ji etinye onwe ha n'ọrụ n'agbanyeghị nje Corona?
Ọ bụ oge na Ojii / Africa Ndi Kristian, ndi isi na ndi ara, meghe anya ha na nti ha: "Iso Christianityzọ Kraịst bụ mkpokọta nke isi na ngwụsị, akụkọ na-enweghị isi na akụkọ ifo ” Onye ọ bụla na - ekwu okwu irere na - akwụ ụgwọ onye na - ege ya ntị.
Ọdịiche dị n'etiti Blacks / French na Whites / French: Blacks / French bụ French na-enweghị ike, na-abaghị uru, a na-emegbu ha ma na-atụle "Ha bụ naanị French na akwụkwọ" ... (VIDEO)
Mmetụta nke ndị ọgọ mmụọ na mgbanwe nke Iso ;zọ Kraịst; ndi a bu aha ndi Jisos: dika okpukpe ndi Greek si mee, Apollos the Sun Chineke nwere nwa nwoke anakpo Asclepius / Asclepius na aka ya enwere umu aka ndi nwanyi ole na ole n’ime ndia anakpo Iaso ma obu Ieso bu onye chi ndi Greek. na-agwọ ọrịa
Jizọs na-agbasi mbọ ike n'inye ndị ọcha ibe ya ịmepụta ọnụnụ Coronavirus ọhụrụ! Ndị ojii ndị kwenyere na a na-akpọ Jizọs kwesịrị ịgba ọkụ na hel otu ụbọchị!
Aug07 08: 40